Fiisooyinka Royal - Shaqada ka bilow Kanada, Mareykanka, Yurub, Singapur
Fiisooyinka Royal - Shaqada ka bilow Kanada, Mareykanka, Yurub
Ncvt Mis Wasaaradda Horumarinta Xirfadaha iyo Ganacsiga
Shaqooyinka at Bayt - No.1 Job portal ee Imaaraadka Carabta
Published by Shirkadda Dubai City at August 26, 2019
La Taliyaha Socdaalka ee Boqortooyada Visa
Fiisooyinka Boqortooyada (Royal Visas) shirkadayada ayaa hadda diyaar ah. Waxaan caawinay dadka ka socda Mumbai iyo Hyderabad, India si aad shaqo u hesho gudaha Mareykanka, Canada iyo Yurub. Kooxdayadu waxay iibsadeen duug Shirkadda Visa si lagaaga caawiyo inaad gaadho Meelo caalami ah oo ka kala yimid daafaha dunida !.
Waxaan hadda caawinaynaa ardayda sidoo kale shaqaalaha caalamiga ah si ay Visa ugu helaan Mareykanka iyo Kanada iyo sidoo kale Yurub. Shirkadeena ayaa maareysa howlo badan loogu talo galay qarashyada caalamiga ah. Waxaan caawinaynaa dadka asal ahaan kala duwan. Maaddaama ay shirkaddeennu soo iibsatay dhowr shirkadood oo duug ah si ay uga caawiso qarashyada si ay u hesho Soo-booqde Mareykanka Visa, ama shaqeeya fiiso. Waxaan ka mid nahay shaqooyinka ugu wanaagsan ee lataliyayaasha Mumbai iyo Hyderabad. Waxaan hadda u dhaqaaqnay USA Business La taliyayaasha Visa ee Hyderabad.
Kumaan kun oo qof ayaa jecel adeegyadayada!
In kabadan laba kun ee macaamiisha faraxsan adduunka oo dhan. Dadka Hyderabad runtii aad ayey ugu mahadsan yihiin Shirkadda Dubai City Royal Visa iyo La-Taliyaha Socdaalka.
Dubai Shirkadda Magaalada ayaa dad badan sameysay riyooyinku way rumoobeen inaan booqdo Canada, Mareykanka iyo xitaa Dubai. Kooxdayada khubaroyinka ah ee ka caawiya shaqo raadinta fiisaha iyo ogolaanshaha shaqada ee wadamada shisheeye. Indian khubaradu waxay qadariyaan taageeradayada iyo aragtidayada ku aaddan nidaamka fiisaha ee Hindida. Macmiil ahaan runti waad dareemi kartaa runtii cajiib ah Inaad wadahadal la yeelatid kooxdeena khubarada Royal Visas ee ka socota Dubai.
Ka xulo Dubiyaasha Boqortooyada iyo Adeegga Socdaalka ee Dubai!
Haddii ay tahay inaad maareyso noloshaada cusub had iyo jeer waad raaci kartaa riyadaada. Shirkadeena waa mid bulshada aad u wanaagsan waxaan qabnaa adeegyo badan loogu talagalay. Waxaan rajeyneynaa inaad doorato mid ka mid ah wadamada waxaadna heli doontaa meelo xiiso leh oo aad booqato. Waad iibsaneysaa fiiso waxaanan sameyneynaa inta kale !.
Kuweyt - Maxaa mudan
Sida loo kireeyo baabuur dibedda ah (iyo in ka badan). Tilmaanta kharashyada.
Maxaa dukumiinti ah Kuwait? Visa Kuweyt Dukumintiga u oggolaanaya muwaadiniinta reer Poland inay u guuraan dhulka Kuweyt waa fiiso, oo laga heli karo Safaaradda Kuwait ee Warsaw. Qaab kale oo lagu helo dukumiinti (muddo aan ka badnayn bilo 3) waa in lagu gato garoonka diyaaradaha ee Kuwayt, iyada oo aan la helin qaab rasmi ah. Kuwa haysta fiisaha dalxiiska ee Kuweyt waxay noqon karaan kuwa haysta baasaboor shaqeynaya ugu yaraan 6 bilood laga bilaabo taariikhda bixitaanka. Ujrada fiisaha ayaa ah 3 KWD, qiimaha kaas oo isbeddelaya qiyaastii 35-40 PLN. Kuwait lacag intee la'eg ayay qaadanaysaa? KWD Kuwaiti Dinar! Muuqaalka ku yaal xeebta Kuwaiti ee xeebta, oo u dhalaalaysa qorrax dhaca, oo ku xeeran biyaha gacanka Faaris, oo lagu qurxiyey doonyo iyo maraakiibta ku soo laabanaya dekeda, ayaa runtii lagu xasuusan doonaa muddo dheer kuwa iyagu yeelan doona Fursad ay indhahooda ugu fiiriyaan aragtidan. Intaa waxaa sii dheer, safar Kuweyt waa fursad weyn oo lagu arko Xarunta Sayniska, oo ah aquarium-ka ugu weyn ee ku yaal Bariga Dhexe oo dhan, kaasoo ay ku urursan yihiin noocyada xayawaannada badda ku nool Gacanka Carbeed, oo ay ka mid yihiin sharkooyinka. Si aad indhahaaga oo dhan ugu aragtid soojiidashooyinkaan, kahor intaadan bixin, waa inaad xasuusataa jawaabta su'aasha "Lacagdee Kuwait?" - Lacagta Kuwaiti waxay siin doontaa socotada safar amni iyo nabadgelyo leh.
Lacag intee le'eg ayaan ku aadaa Kuwait?